I-Samsung Galaxy J4 + kunye neGalaxy J6 +: Iinkcukacha ezisemthethweni | I-Androidsis
Izolo sifumene imifanekiso yokuqala ecociweyo kwiwebhusayithi yeSamsung malunga neefowuni zombini, kwaye emva kosuku besisele sinayo Ukucaciswa ngokupheleleyo kwale Galaxy J4 + kunye neGalaxy J6 +. Iifowuni ezimbini ziphinde zavela kwiwebhusayithi yenkampani yaseKorea, ngeli xesha ngokupheleleyo. Ke sele sinoyilo kunye nokubalulwa kwezi modeli zimbini zintsha.
Ezi Galaxy J4 + kunye neGalaxy J6 + ziza kuqinisa uluhlu oluphakathi oluphakathi lwe-Samsung. Siyabona ukuba inkampani ifuna ukubonelela ngento entsha, eyahlukileyo kuleyo siyibonileyo ukuza kuthi ga ngoku. Kuba kuyilo olutsha olunikiweyo, ukongeza kwiinkcukacha ezahlukeneyo.
Kuyamangalisa ukuba bambalwa umahluko phakathi kwezi fowuni. Isamsung inika iimodeli ezimbini ezifanayo, kodwa yabizwa ukuba ithengise kakuhle kwicandelo layo lentengiso. Siza kukuxelela ngakumbi malunga nenye yezi modeli zingezantsi, ngokukodwa.
1 Ukucaciswa kwe-Samsung Galaxy J4 +
2 Ukucaciswa kwe-Samsung Galaxy J6 +
Ukucaciswa kwe-Samsung Galaxy J4 +
Eyokuqala yeemodeli ezimbini yile esinokuyichaza njengento elula. Kuba ine-RAM esezantsi, kunye nomthamo wokugcina omncinci. Kodwa ngokwendlela yoyilo, ikwayimodeli efanayo naleyo yangaphambili, inesayizi efanayo yescreen. Oku kukucaciswa ngokupheleleyo kweGalaxy J4 +:
Isikrini: 6 intshi ngesisombululo 1480 x 720 pixels kunye ratio 18: 9
Inkqubo: I-Quad-Core ivalwe kwi-1,4 GHz
I-RAM: 2 / 3 GB
Ukugcinwa kwangaphakathi: I-16/32 GB (iyandiswa nge-MicroSD)
Cámara traseraI-13 MP nge-f / 1.9 ukuvula kunye ne-LED Flash
Ikhamera yangaphambili: MP engama-5 ene-f / 2.2 ukuvula
Inkqubo yokusebenza: I-Android 8.1 Oreo enamava eSamsung
Ukuxhuma: 4G / LTE, iBluetooth 4.2, imicroUSB
Ubungakanani: X x 161.4 76.9 7.9 mm
Ukucaciswa kwe-Samsung Galaxy J6 +
Okwesibini, le fowuni ilindele thina, eyeyona igqibelele kwezi zimbini. Siyabona ukuba inokudityaniswa okungcono kwe-RAM kunye nokugcinwa kwangaphakathi. Ukongeza, akufuneki silibale ukuba le modeli inekhamera yangasemva ephindwe kabini, eqala ukufumana ubukho kwiifowuni zeSamsung. Imodeli egqibeleleyo, kwaye oko kuya kubiza kakhulu. Ngokuphathelele kuyilo, njengoko besitshilo, iyafana. Oku kukucaciswa ngokupheleleyo kweGalaxy J6 +:
Ukugcinwa kwangaphakathi: I-32/64 GB (ii-Amplable ezine-microSD)
Cámara trasera: 13 MP + 5 MP eneeferches f / 1.9 kunye f / 2.2 kunye neFlash Flash
Abanye: Icala lokufunda ngeminwe, NFC
Kuyamangalisa ukuba i-Samsung ikhethe iifowuni ezimbini ezifanayo. Ukusukela kwinqanaba lokubonwayo, uyilo lweemodeli ezimbini luyafana, kunye nescreen esinye. Iscreen, esasipapashwe njengescreen esingapheliyo, esifana nesiphelo saso esiphakamileyo, kodwa oko akunjalo. Oko kuye kwaba kukudana okuncinci kwabaninzi, kuba kuyilo olwahlukileyo kulindeleke kwinkampani yaseKorea.
Nangona ngokweenkcukacha, Ezi Galaxy J4 + kunye neGalaxy J6 + azidanisi. Zombini ezi modeli ziyahambelana, kwaye kuyamangalisa ukuba sine-NFC kuzo zombini iimodeli, ukongeza kwi-sensor yeminwe esecaleni. Ke ezi fowuni azisweli nto.
Le yinxalenye esingenayo idatha ngalo mzuzu. Sele sinenkcazo kunye noyilo lwezi modeli zimbini zintsha ze-Samsung kunye nathi, kodwa akukho kwaziwa malunga nexabiso lale modeli. Into esengqiqweni kukuba ixabiso leGlass J6 + liza kuphakama kunelo leGalaxy J4 +, kodwa ayaziwa ukuba liza kuba yintoni ixabiso lemodeli nganye. Asinayo idatha ngomhla wokukhutshwa kwayo.
Inyani yile, akufuneki ithathe ixesha elide ukuba olu lwazi lufike. Ke siya kuthi sinake ulwazi ngakumbi olunikezelwa yinkampani malunga noku. Ucinga ntoni ngale Galaxy J4 + kunye neGalaxy J6 +?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Samsung Galaxy J4 + kunye neGalaxy J6 + sele zisesikweni